DataRobot: Chigadzirwa Chekushandisa Muchina Kudzidza Platform | Martech Zone
Makore apfuura, ini ndaifanirwa kuita ongororo hombe yemari kukambani yangu kufanotaura kana kuwedzerwa kwemubhadharo kunogona kudzora mushandi, mari yekudzidzira, kugadzirwa, pamwe nehunhu hwevashandi. Ndinoyeuka ndichimhanya uye kuyedza akawanda mamodheru kwemavhiki, ese achigumisa kuti paizove nekuchengetedza. Wangu Director anga ari mukomana anoshamisa uye akandikumbira kuti ndidzokere ndonovaongorora imwezve nguva isu tisati tasarudza kurova mibairo yevashandi mazana mashoma. Ndakadzoka ndokumhanya manhamba zvakare… nemhedzisiro yakafanana.
Ndakafamba Director vangu nemamodels. Akatarisa kumusoro ndokubvunza, "Ungabheja basa rako pane izvi?" ... anga ari serious. "Hongu." Isu takazokwidziridza iyo yepasi mubhadharo wevashandi vedu uye iyo mari yekuchengetedza yakapetwa kaviri mukati megore. Mhando dzangu dzakafanotaura mhinduro kwayo, asi dzaive kure nemhedzisiro yacho. Panguva iyoyo, ndicho chakanakisa chandingaite kupihwa Microsoft Access neExcel.
Dai ndaive nekomputa simba nemuchina wekugona kugona zviripo nhasi, ndingadai ndakave nemhinduro mumasekondi, uye fungidziro chaiyo yemutengo wekuchengetedza ine mashoma kukanganisa. DataRobot ingadai isina chinhu kunze kwechishamiso.
DataRobot inogadzirisa iyo yese modelling lifecycle, ichigonesa vashandisi kukurumidza uye nyore nyore kuvaka yakanyatsoita fungidziro mamodheru. Izvo chete zvinoshandiswa zvinodiwa kuda kuziva uye data - kukodha uye hunyanzvi hwekudzidza zvemuchina zvakasarudzika zvachose!
DataRobot ipuratifomu yeData Sayenzi Vanodzidzira, Bhizinesi Vanoongorora, Dhizaina Masayendisiti, Vatungamiriri, Software Injiniya, uye IT Professionals kugadzira, kuyedza, uye kugadzirisa data mamodheru nekukurumidza uye nyore. Heino vhidhiyo yekutarisa:
Maitiro ekushandisa DataRobot ari nyore:
Ingest yako data
Sarudza chinongedzo chakanangana
Vaka mazana emamodeli mune kamwe chete
Wongorora mamodheru epamusoro uye uwane nzwisiso
Shandisa iyo yakanakisa modhi uye ita fungidziro
Zvinoenderana neDataRobot, avo Mabhenefiti Anosanganisira:
kunyatsoita - Ipo otomatiki uye nekumhanyisa kuchiwanzo kuuya nekushomeka kwemhando yepamusoro, DataRobot inosarudzika yakasarudzika pane ese iwo mafonti. DataRobot inotsvaga otomatiki kuburikidza nemamirioni emubatanidzwa wema algorithms, dhata rekugadzirisa matanho, shanduko, maficha, uye kugadzirisa parameter yemhando yepamusoro yemuchina yekudzidza modhi yako. Yemhando yega yega yakasarudzika - yakanyatsogadzirirwa iyo yakatarwa dheti uye yekufanotaura tarisiro.
havukavu - DataRobot inoratidzira inowirirana yakafanana modelling injini iyo inogona kukwira kusvika kumazana kana kunyange zviuru zvemaseva ane simba kuti aongorore, kuvaka uye kugadzirisa mhando dzekudzidza dzemuchina. Mahombe madhata? Akawanda madhataseti? Hapana dambudziko. Iko kumhanyisa uye kusagadzikana kwekuenzanisira kunogumira chete necomputational zviwanikwa pane DataRobot inoraswa. Nesimba rese iri, basa raimbotora mwedzi ikozvino rapera mumaawa mashoma.
Ease-of-Use - Iyo intuitive web-based interface inobvumidza chero munhu kusangana neplatform yakasimba kwazvo, zvisinei nehunyanzvi-chikamu uye ruzivo rwekudzidza kwemuchina. Vashandisi vanogona kudhonza-uye-kudonha vorega DataRobot iite basa rese kana ivo vanogona kunyora avo mamodheru ekuongororwa nepuratifomu. Kuvakirwa-mukati kwekuratidzira, senge Model X-Ray uye Feature Impact, inopa kumeso kwakadzika uye nzwisiso nyowani nyowani yebhizinesi rako.
Ecosystem - Kuchengeta pamwe nekukura ecosystem yemuchina kudzidza algorithms hakuna kumbove kuri nyore. DataRobot iri kuramba ichiwedzera iyo yakakura seti yemhando dzakasiyana, dzakanakisa-mu-kirasi algorithms kubva kuR, Python, H20, Spark, uye mamwe masosi, ichipa vashandisi yakanakisa seti yeatytics maturu ezvekufungidzira matambudziko. Nekungobaya bhatani reKutanga bhatani, vashandisi vanogona kuendesa matekiniki avasati vamboshandisa kana vangave vasina kana kujairana nawo.
Kukurumidza Kutumirwa - Iwo akanakisa ekufananidzira mamodheru ane zvishoma kune isina kukosha kwehurongwa kunze kwekunge akurumidzirwa kuitwa mukati mebhizinesi NaDataRobot, kuendesa mamodheru ekufanotaura kunogona kuitwa nemaminetsi mashoma-ekukanya. Kwete izvozvo chete, mhando dzese dzakavakwa neDataRobot dzinoburitsa REST API yekupedzisira, ichiita mhepo inopindirana mukati meazvino mabhizinesi ekushandisa. Masangano anogona ikozvino kuwana bhizinesi kukosha kubva kumuchina kudzidza mumaminetsi, panzvimbo yekumirira mwedzi kuti unyore kodhi yekodhi uye kubata nezvakakosha zvivakwa.
Enterprise-Giredhi - Zvino iko kudzidza kwemuchina kunokanganisa kuwanda kuri kuramba kuchiwedzera kwemaitiro ebhizinesi, hazvichasarudzike kuribata sechishandiso chemugadziri chine kuchengetedzeka kushoma, kuvanzika uye kuchengetedza bhizinesi kuenderera. Muchokwadi, zvakakosha kuti chikuva chekuvaka nekuisa mamodheru chakaomeswa, chinogona kuvimbwa uye nekubatana mushe neiyo ecosystem yehunyanzvi mukati mesangano.
Rongedza Rarama Demo reDataRobot
Tags: aichakagadzirwa njerezvoga muchina kudzidzakumedza datakugadzirira datadata sciencekuona datadatarobotdatasetschimiro chinokanganisah2odhata rakakuramachine learningmuenzaniso x-raymodelling engineachifanotauraPythonrchimvari